Politika famerenam-bola - OneOdio
Ity no lahatsoratra an-dahatsoratra.
Tsy manarona fahavoazana noho ny lozam-pifamoivoizana, fanararaotam-po, fanararaotana, fanaovana tsinontsinona, tselatra, herinaratra, fanodinana herinaratra, na fanamboarana entana tsy nahazo alàlana. Ity warranty ity dia mandrakotra ny fanoloana ilay unit simba araka ny fahazoanay azy. Raha tsy kalitao vokarin'ny tena izy, indrisy, tsy afaka manolotra famerenam-bola izahay na fifanakalozana.
karazana verinia info@oneodio.com mivantana. Vantany vao voaray sy dinihinao ny fiverenanao dia handefa mailaka anao izahay hampandre anao fa nahazo ilay zavatra navadinao ianao. Hampahafantarinay anao koa ny amin'ny fankatoavana na ny fandavana ny famerenam-bola anao.
Avy eo, mifandraisa amin'ny banky. Matetika dia misy fotoana fanaraha-maso alohan'ny hividianana refy.
Raha nahavita ireo rehetra ireo ianao dia mbola tsy nahazo ny valisoanao, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny info@oneodio.com.
Ny entana lafo vidy ihany no averina haverina, indrisy fa tsy azo averina ny entana amidy.
Izahay dia manolo ihany ny singa raha tsy maharatsy na simba. Raha mila mifanakalo an'io zavatra io ianao dia andefaso mailaka izahay amin'ny info@oneodio.com. Handefa vaovao vaovao ho anao izahay ao anatin'ny 3 andro miasa.
Raha voamarina ho fanomezana ilay entana rehefa novidy sy nalefa mivantana avy aminao, dia hahazo fanomezana kely avy amin'ny tranonkala ofisialinay.
Miankina amin'ny toerana misy anao, ny fotoana mety ho azonao atao amin'ny vokatrao azonao ampiasaina ho anao.
Izahay dia manome antoka sy manome antoka ny asa rehetra natao. Raha misy olana mandritra ny fampiasana dia azafady hazavao aminy ny antsipiriany amin'ny alàlan'ny kaody ID, ary alao mivantana ny mailaka info@oneodio.com. Misaotra betsaka tamin'ny fanohananareo.